Yeka Ukufihla Isici Esibaluleke Kakhulu Ebukhoneni Bewebhu Yakho | Martech Zone
Kaningi kunalokho, lapho ngivakashela iwebhusayithi yenkampani, into yokuqala engiyifunayo ibhulogi yabo. Ngokuzimisela. Angikwenzi ngoba ngibhale incwadi ukubhuloga ezinkampani, Ngifuna ngempela ukuqonda inkampani yabo nabantu abalandelayo.
Kepha imvamisa angiyitholi ibhulogi. Noma i-blog isesizindeni esihlukile ngokuphelele. Noma isixhumanisi esisodwa ekhasini labo lasekhaya, elivele likhonjwe njenge blog.
Abantu bakho kungenzeka babe olunye lwezinkampani zakho ezitshala imali enkulu futhi lelo talente lingenye yezimpahla zakho ezibaluleke kakhulu lapho uthengisa. Ufihlelani lelo thalente? Ezinye izinkampani zingakopisha imikhiqizo yakho, izici zakho ngisho nezinzuzo zakho… kepha azikwazi ukukopisha abantu bakho. Abantu bakho bangumahlukanisi omkhulu kunayo yonke inkampani yakho enayo.
Gqoka ikhasi lakho lasekhaya ngokuthunyelwe kwakho kwakamuva kwebhulogi! Faka izithombe noma izixhumanisi kubalobi bebhulogi yakho. Ukushicilela i-blog yakho kokuphakelayo ekhasini lakho ngalinye akuthuthukisi ukwenziwa kwalawo makhasi ngokunikeza okusha, okuqukethwe okuhambisanayo… futhi kunikeza nendlela izivakashi zokwazi abantu abangaphansi komkhiqizo wakho.
Akukhawulelwe kubhulogi, noma. Ukuba ne-logo ye-Twitter ne-Facebook kuhle ... kepha ukushicilela ukusakaza kwakho kwe-twitter nokufakiwe okuthandwayo kwe-Facebook noma amaFacebook Fans kukhanga kakhulu. Abantu bathenga kubantu - ngakho-ke kungani ufihla isici esibaluleke kakhulu sobukhona bakho bewebhu?
Ezinye izindlela zokufaka abantu kusayithi lakho:
Ikhasi leqembu - kufaka ikhasi lethimba kumnandi. Uma ungafaka nokuthunyelwe kwabo kwakamuva kwebhulogi kungcono kakhulu!
Okuphakelayo iwijethi - faka okuthunyelwe kwakamuva okuvela kubhulogi yakho kusayithi lakho. Zama ukufaka izithombe zombhali noma isithombe esifakiwe kusuka kokuthunyelwe uqobo.
Iwijethi ye-Facebook - I-Facebook inezinombolo eziningi ze- ama-plugins ezenhlalo lokho kumnandi ngokuletha umphakathi wakho we-Facebook kusayithi lakho futhi okuphambene nalokho.
Amawijethi we-Twitter - letha ukusakazwa kwengxoxo yakho ye-Twitter kuwebhusayithi yakho!
Ukushicilela le ngxoxo kusayithi lakho kubonisa izethameli zakho ukuthi uzimisele ngokuphelele kuzo ngena ezingxoxweni ezizuzisayo namathemba akho noma amakhasimende. Le yinto okungenzeka ingabi phambili futhi ibe maphakathi kuwebhusayithi yakho, kepha lokho kufanele kube lula ukuyithola nokuyilandela.
Tags: blogokuphakelayo kwebhulogiukushicilela ibhulogiiwijethi ye-facebookAbantuabantu abathengisayoethengiswa kakhuluiwijethi ye-twitter